/blog/Gallery/2019 Sida loo sameeyo testosterone si aad uhogaliso xannibaadaha 6
Posted on 05 / 07 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Wax walba oo ku saabsan testosterone budo ah
1. Maxay tahay baaritaanka asaasiga ah ee testosterone
2. Muxuu jimicsiga imtixaanka u sameeyaa jidhkaaga
3. Sidee loo sameeyaa imtixaanka kobcinta Awoodda tallaabo tallaabo tallaabo ah
4. Testosterone Enanthate tallaabada Homebrew tallaabo
5. Ku bilaw cabirkaaga steroids oo ka soo jeeda Testosterone
Maqaalkani wuxuu sharaxaad faahfaahsan ka bixinayaa sida aad u samayn kartid testosterone si aad uhogaliso Homebrew. Waxa kale oo uu iftiimiyaa faa'iidooyinka imtixaanka ee Testosterone Enanthate.
Waa maxay testosterone enanthate
Iyada oo jimicsiga jirka ee jaan-gooyaha ah uu sii kordhayo, dadku marwalba waxay eegayaan waxyaallaha ka caawin kara inay helaan faa'iido ka badan kuwa kale. Tusaale ka mid ah kaalmooyinka noocaas ah waa baaritaanka istiraatiijiga ah ee loo yaqaan 'testosterone enanthate' kaas oo ka mid ah steroids testosterone. Waa labadaba iyo sidoo kale Steroid anabolics.
Inkastoo la mamnuucay isticmaalka, waxay sii ahaanaysaa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee loogu talagalay steroid by jirka ah. Kaliya maaha faa'iido u leh jir-dhisayaasha, laakiin sidoo kale waxay faa'iido u leedahay kuwa u adeegsanaya daaweynta beddelidda baaritaanka testosterone, ee loogu talagalay in la mariyo dib-u-dhiska jinsiga iyo daaweynta hypogonadism.
Muxuu jimicsiga imtixaanka u sameeyaa jidhkaaga
Soo kabashada la hagaajiyay
Testosterone Enanthate ayaa lagu xaqiijiyay in uu ku caawinayo dayactirka unugyada kaas oo keena soo kabashada jidhka oo deg deg ah. Iyada oo la kordhiyo soosaarista borotiinka, waxay caawisaa unugyada si dhakhso ah u soo kabsata xitaa ka dib marka aad u shaqeyso jimicsiga. Natiijadu waxay noqon kartaa mid aad u adag oo aad u aragto natiijada shaqadaada.
Yareynta dufanka jidhka
Inkasta oo dad badani ay dareemaan in ay jimicsi ku filan yihiin, aysan cunin wax badan oo aysan ka lumin dufanka jirkooda ay doonayaan inay lumaan, testosterone Enanthate ayaa cadeeyay in ay si wax ku ool ah u sameyso. Maxay tahay wax la yaab leh haddii aad tahay jirdhis jidheed, ma aad lumin doontid muruqaaga laakiin dufanka xajinta leh ee iyaga ku haya.
Taas macnaheedu waxa weeye in aad ku sii hayneyso muruqyadaada, xitaa ka sii fiican waxay helayaan qeexitaan dheeraad ah. Dufanka jirku ka yar yahay wuxuu kaa dhigayaa inaad qaab joogto ah ku noolaato oo aad ku noolaato nolol dheer.
Haddii aad tahay muruqa muruqyada, waad kuxaqiijin doontaa xaqiiqda ah in testosterone waxtar u tahay saamaynta jirka waa mid heer sare ah. Waxay ka caawisaa hal kor u kaca iyadoo la kordhinayo wax soo saarka unugyada dhiigga ee lafaha lafaha. Dhiigga tijaabada ah ayaa sidoo kale xayiraya saamaynta cortisol, hormoon kaas oo ka shaqeeya habka lagu xakameynayo murqaha taas oo keeneysa in lumo.
Si aad miisaan culus u qaadatid, waa inaad ku guulaysataa awood dheeraad ah. Mid ka mid ah sababaha badan ee jidh-dhisayaasha waxay sameyn doonaan wax kasta si ay u yeeshaan awoodooda waa sababtoo ah waxa ay la xiriirtaa guulo badan oo ka soo gaaray muruqa. Cudurka qaliinka testosterone waa mid ka mid ah steroids aad u fiican oo kaa caawin doona inaad dhisayso xoogaa dheeraad ah oo awood kuu siinaya inaad kor u qaado miisaanka aad mar walba ku ruxday.
Sidee loo sameeyaa imtixaanka kobcinta Awoodda tallaabo tallaabo tallaabo ah
Sameynta adiga kuu gaar ah Imtixaanka Homostera Testosterone Enanthate waxay noqon kartaa mid sahlan ama dhib badan, sida aad u dooratid inay noqoto. Dad badan ayaa laga yaabaa inay kugu niyad jabiyaan saynis aad u badan, laakiin waxaan si fudud u soo bandhigi doonaa. Waa kuwan waa shuruudaha iyo tallaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida aad u heli karto Imtixaanka Imtixaanka Kormeerida;
Testosterone Enanthate budada: Gram 62.5
Cudurka Benzyl (BA): 5ml (2%)
Saliidda canabka ah: 148.13ml
Tools loo baahan yahay
Toban qiyaasood Maqaal kasta oo leh 10 ML (Qaybta oo dhan waa inay ku jirtaa xarkaha, gabbad-joojiyaha, iyo tubada.)
20mL / 60 ml syringe oo leh irbadda 18-21.
Cirbadda 3mL oo leh cirbadda 18-21
Glass Rod iyo 100mL Beaker
Testosterone Enanthate tallaabada Homebrew tallaabo
Tallaabada 1: Baaritaanka miisaanka oo si tartiib ah u samee budada.
Tallaabada 2: Ku dar budada, BA, iyo BB ee xajinta
Tallaabada 3: U garaac bakhaarka biyaha qubeyska
Tallaabada 6: Ku xejin kari kari furka
Waa kuwan tallaabooyin faahfaahsan oo ku saabsan sida loo sameeyo;
Tallaabada 1: Baaritaanka miisaanka oo si tartiib ah u samee budada
Miisaamee Testosterone Enanthate budada si loo hubiyo in aad isticmaalayso tirada saxda ah ee aad u baahan tahay si aad u sameyso qoladaada. Si aad u hesho miisaanka saxda ah, qaado warqad yaryar oo ku rid miisaanka.
Si aad u hubiso inaanad ku darin miisaanka waraaqda marka aad miisaanayso budada, riix daraasad si aad u dhigto miisaanka si eber. Hadda waxaad si tartiib ah u dari kartaa budada si aad uga fogaato in aad aad u badan tahay oo aad u baahatid in aad ka qaadid.
Mararka qaarkood budadu waxay miisaan yar yar tahay inaad u baahan tahay inaad sii dego mar kasta oo aad u baahan tahay inaad ku darto qaar. Habka ugu fiican ee loo jabiyo waa iyada oo lagu darayo budo yar kadibna ku cadaadi miisaanka adoo isticmaalaya fartaada una oggolow lambarka inuu hoos u dhaco. Marka aad hubto in aad miisaankaaga 25 si sax ah u miisaantay, hadda waad fiicantahay inaad tagto. U miisaamee tijaabada kobcin Enkathate si aad u hubiso in aad isticmaalayso tirada saxda ah ee aad u baahan tahay si aad u noqoto
Ku rid budada miisaanka ah ee xayawaanka.
Ku dar 2ml ee Benzyl Alcohol iyo 2ml Benzyl Benzoate.
Hawlaha ugu muhiimsan ee ku darista Benzyl Alcohol waa in ay u dhaqmaan sidii wakiil sterilizing ah. Sidoo kale wuxuu u shaqeeyaa sida mashiinka dhoobada ah oo dhan hal shidaal. Benzyl Alcohol sidoo kale waa xalka ugu badan ee la isticmaalo, iyo faa'iidada leh ee la yimaadaa waa in ay ku caawiso in uu qabo cirbad aan xanuun lahayn.
Talaabadani waa mid ikhtiyaari ah, laakiin haddii aad rabto in geeddi-socodku si habboon u shaqeeyo, markaa waa inaadan ka boodin. Dhar diyaarso oo ku buuxi qiyaastii biyo ah. Ku dhaji ilka kuleylka, tusaale ahaan, kariyaha iyo ha u kululee.
Qaado digsi oo gashiga ku rid. Ku rid digsiga dhowr mitir oo biyo ah. Indhaha ku hay budada oo daawee sida ay u kala yaacdo illaa ay u dhowdahay in la nadiifiyo. Xalka cad waxaa loola jeedaa in isku dar ah ay hadda dhalatay.
Dhamaan arrimahan waxay kudartaa in ay budada ka dhammeeyaan dhammaan guluubyada. U dhaqaaq dhaqaaq tallaabada xigta marka aan la arki karin budo.
Sug sugidda dib u qaboojinta wax yar ka dibna ku dar saliida canabkiisa. Markaa waad yareyn kartaa si aad u sahlanaato sahminta.
Saliid shinni ah waa hooyada dhammaan saliidaha kale ee u shaqeeya sida sidayaal. Maxaa ka dhigi kara isticmaalka marka loo eego kuwa kale in ay tahay mid khafiif ah oo leh suuxdin. Sidoo kale, waxay kaa caawineysaa dib-u-dhiska unugyada waxyeelada leh iyo in la soo koobo dhammaantiisna way kuu wanaagsan tahay! Uma maleynaysid inaad ka cabaneyso xasaasiyad xasaasiyadeed oo ay sababto saliidda canabka ah.
Tallaabada xigta ee aad qaadi doonto waa inaad xalliso xalka siriinjaha aad isticmaali doonto si aad uga faaidaysato. Waxaad isticmaali kartaa hal sirinjiye oo waaweyn ama mid yar oo aad dooratid inaad ku celcelisid geeddi-socodka dhowr jeer.
Qalabka siringe 0.22um ka soo duuduub kadib markaad hagaajisid cirbad cagaaran dhinaca yar oo waxaad ku dabooshaa sirinjiga. Isticmaal suufka khamriga, tirtir dusha sare ee nadiifiyaha nadiifka ah iyo gali cirbadda cagaaran. Saar cirbadda ku xiran shaandhada siriinjaha ku shub.
Talaabadani waa tallaabo aad u muhiim ah, dhammaantoodna dhameeyeen steroids waa inay maraan. Waa caadi in shaandhada laga yaabo inay xannibto inta lagu jiro habka sifeynta. Natiijo ahaan, waxaad ogaan doontaa in geeddi-socodku uu noqdo mid si tartiib ah u socda. Si arrintan loola dagaallamo, u bedel shaandhada cusub ee cusub si aad u badbaadiso xannuunka inaad sugto.
Adiga, si kastaba ha ahaatee, waxay ubaahan tahay in la ogaado in waqtiga loo qaaday si loo xereeyo xalku wuxuu ku xiran yahay steroid iyo sidoo kale mg / ml ee sheyga.
Marka lagu dhamaystiro shaashadda nadiifka ah, geeddi-socodku waa dhamaystiranyahay.
Xidhin xalkaaga adigoo isticmaalaya dabool furan.
Ku bilaw cabirkaaga steroids oo ka soo jeeda Testosterone
Hormoonkaas steroid homebrew waxa ugu fiican ee aad ku bilaabi karto sababtoo ah jidhkaaga waa uu yaqaan. Waxaa laga soo saaraa jirka si dabiici ah waxayna ka caawisaa inay koraan, dayactiraan oo ay ku raaxaystaan.
Marka heerarka testosterone ay yaraato, waxaa jira kordhin baruur iyo miisaan. Taageerada tijaabada ah ee loo yaqaan 'testosterone' waa habka ugu wanaagsan ee aad ku gaari kartid waxqabadka cayaaraha, adkaysiga iyo muruqyada xoogan. Haddii aad qorsheyneyso in aad dib u cusbooneysiiso jirkaaga, markaa waa inaad ka fakartaa inaad sameysid stero-yadaaga oo aad isticmaaleyso Testosterone.
Arrinta la timaadda sameynta steroid-taaga gudaha ah waa inaadan ku kalsoonayn in ay ku siin doonto natiijooyinka aad mudan tahay. Xitaa ka dib markaad raacdo qodbada saxda ah, waxaad ogaan doontaa inaadan ku kalsoonayn waxa aad soo saartay. Dad badan oo soo saaro steroids waxay u adeegsadaan habka tijaabada iyo qaladka.
Haddii aadan haysan xirfado shaybaareed oo kugu filan, markaa waa inaadan marnaba galin nidaamkaan sababtoo ah waxay noqon kartaa mid khatar ah. Sida lagu arkay qodobka waxaad u baahan tahay oo keliya qalabka sheybaarka aasaasiga ah laakiin ka maqan talaabo yaryar ayaa laga yaabaa inay ku dhammaato arimaha khatarta badanaa ka yimaada habka mudista. Sababtoo ah diyaargarowga stero qolof ah waa inay ahaato mid nadiif ah ka hor inta aanad isku mudin. Waxay micnaheedu tahay in aad tahay inaad si taxadar leh u sameyso inta lagu jiro diyaarinta. Ma laha indho aad u fiican oo kuu keeni kara inaad naftaada dhaawacto adigoo isku dayaya inaad soo saarto wax aad soo iibsan kartid.
Si aad ugu kalsoonaatid inaad qaadatid qiyaasta tijaabada ah ee saxda ah ee tijaabada ah iyo tayada, waa inaad ka fakartid maalgelinta hore ee steroidska. Ma aha oo keliya inaad ku kalsoonaato, laakiin sidoo kale aad ugu roon tahay inaad isticmaasho.
Soo saarida steroids-kaaga gudaha ayaa faa'iido leh maxaa yeelay waxay ku caawineysaa inaad ku guulaysato guulaha aad ku gaarto qolka jimicsiga adiga oo aanad ku dhicin meelo hoose oo jeebkaaga ah. Waxa kale oo laga yaabaa inay soo bandhigto beddel wanaagsan oo loogu talagalay sterids tayadoodu hooseeyso oo alaab-qeybiyeyaal ah oo suuq geynaya. Iyadoo la qaadanayo qandhada ugu fiican ee Testosterone ee kor ku xusan, waxaad awoodaa inaad soo saarto alaab tayo sare leh.
Sida Loo Doorto Qalabka Dabeecadda Qalabaynta Xiddiga 12 Sidee loo Isticmaalaa Qorshaha Trenbololone si uu u qaso Trenbolone Enanthate budada 2019